काठमाडौँ, २४ चैत । पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावले केही दिनदेखि प्रभावित मौसम सोमबारदेखि क्रमिक रुपमा सुधार हँुदै जाने जल तथा मौसम पूर्वनुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
उक्त वायुको प्रभावले आज देशभरि नै आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका पूर्वी तथा मध्य भू–भागका एक दुई स्थानमा हावाहुरी र मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सोमबार पश्चिमी क्षेत्रबाट क्रमिक सुधार हँुदै जाने छ । मध्य र पूर्वी क्षेत्रको मौसम भने एक÷दुई दिन प्रभावित नै हुने मौसमविद् पौडेलले बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिबाट मौसम सुधारहँुदै जाने बताइएको छ ।
यी महिलाले जन्माइन् एक वर्षमै तीन सन्तान, यो कसरी सम्भव भयो ? (पुरा पढ्नुहोस्)
जनप्रतिनिधि नै शेर पल्टेपछि जनता कोसँग न्याय माग्न जाने ? फर्निचर उद्योग संचालन गर्ने अनुमति लिन आएका सेवाग्राहीमाथि यी वडाअध्यक्षको दादागिरी हेर्नुहोस् ! (भिडियोसहित)